MX Mate - Linux စမ်းသပ်မှုနည်းနည်း - MX Linux မှာအလုပ်လုပ်တာ Linux မှ
MX Mate - Linux စမ်းသပ်မှုနည်းနည်း - MX Linux ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာ
များစွာသော Linux သုံးစွဲသူများသည်ပုံမှန်မတူညီကြပါ GNU / Linux Distros။ ငါကဲ့သို့သောအခြားသူများ, ငါတို့များသောအားဖြင့်တူညီတဲ့အပေါ် GNU / Linux Distro ကွဲပြားခြားနားသောကြိုးစားပါ Desktop Environments (DEs), Window Managers (WMs) နှင့် Applications (Apps)။ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်မှာ ၂ နှစ်ကျော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးခဲ့တာ Respin (တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သောလျှပ်တစ်ပြက်) ထုံးစံအမည်ရှိ အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux အရာအပေါ်အခြေခံသည် MX Linux.
ထိုအချိန်မှစ။ MX Linux နှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့သည် XFCE Desktop ပတ်ဝန်းကျင်, ပြီးတော့ထည့်သွင်း plasma နှင့် FluxBox, ငါသည်အခြားကြိုးစားနှင့်ထည့်သွင်းရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်တဖြည်းဖြည်းတာဝန်အပ်ပေးပြီ DEs နှင့် WMs သူက Respin၊ တစ်ခုချင်းစီ၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခံစားရရန်တဖြည်းဖြည်းချင်းနည်းလာသည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ငါနည်းနည်းပြမယ် « MX Mate », IE, MX Linux + Mate DE.
1.2 Distro MX Linux နှင့် Respin MilagrOS GNU / Linux
2.1 အဘယ်ကြောင့် MX Mate လုပ်?
2.3 Mate DE အပေါ်ငါ့အမြင်
ဤသို့ဖြင့်အချို့သောသူများကwonderကန်အမှန်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ Mate ဆိုတာဘာလဲ။ Mate ဆိုတာဘာလဲ။ Mate ကိုဘယ်လို install လုပ်သလဲ။, ငါတို့အပေါ်မှာငါတို့ယခင်ထုတ်ဝေ၏ link ကိုအောက်တွင်ငါချန်ထားမည် Matte Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်သင်ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာလိုလျှင်ဘလော့ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်လုပ်နိုင်သည်။
"l ကြောင်း Desktop ကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်လက်၍ GNOME 2. ဆက်လက်၍ GNOME XNUMX. သည်ရိုးရာ Linux နှင့်အခြား Unix ပုံစံလည်ပတ်မှုစနစ်များ၏ metaphors များကို သုံး၍ အလိုအလျောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးသည်။ ရိုးရာ desktop အတွေ့အကြုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်နည်းပညာအသစ်များအတွက်အထောက်အပံ့များဖြည့်ဆည်းရန် MATE ကိုတက်ကြွစွာတီထွင်လျက်ရှိသည်။ " MATE - DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ထားသနည်း။
Distro MX Linux နှင့် Respin MilagrOS GNU / Linux
အနည်းငယ်သိလိုသူများအတွက်ဖြစ်သည် Distro MX Linux နှင့် Respin MilagrOS GNU / Linux တို့ဖြစ်သည်နောက်ထပ်လေ့လာစူးစမ်းမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေထားသည့်စာပေများ၏လင့်ခ်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
"MX ကမင်းပါna Distro GNU / Linux သည် antiX နှင့် MX Linux အသိုင်းအဝိုင်းများအကြားပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြော့ရှင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုပေါင်းစပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Operating Systems ၏မိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာများသည်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူစွာပြီးမြောက်စေနိုင်ပြီး anti USB မှ Live USB နှင့်လျှပ်တစ်ပြက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်မြှင့်စွမ်းရည်များထည့်သွင်းပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဗီဒီယိုများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလွန်ဖော်ရွေသောဖိုရမ်များမှတဆင့်များပြားသောအထောက်အပံ့များရှိသည်။" MX-19.4: သင်ပြီးပြီ ပြီးတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်တဲ့သတင်းတွေပေးတယ်
MX-19.4: သင်ပြီးပြီ ပြီးတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်တဲ့သတင်းတွေပေးတယ်
"MilagrOS GNU / Linux သည် MX-Linux Distro ၏တရား ၀ င်ထုတ်ဝေမှု (Respin) ဖြစ်သည်။ 64-bit ကွန်ပျူတာများ၊ အရင်းအမြစ်နိမ့်ကျခြင်း၊ အဟောင်းနှစ်မျိုးလုံးအပြင်ခေတ်မှီအဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပြီး GNU / Linux နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ရရှိပြီး (ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး) တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုအင်တာနက်မလိုအပ်ဘဲထိထိရောက်ရောက်နှင့်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှနှင့်အခြားအရာများကိုကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည်။" GNU / Linux အံ့ဖွယ်အမှုများ - respin အသစ်ရရှိနိုင်သည်။ Respines သို့မဟုတ် Distros?
အဘယ်ကြောင့် MX Mate လုပ်?
ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲငါပုံမှန်ကြိုးစားတယ် Desktop Environments (DEs), Window Managers (WMs) နှင့် Applications (Apps)လိုအပ်ပါက Respin MilagrOS GNU / Linux သို့ထည့်ပါ။ အကြောင်းမှာလက်ရှိ Respin (live) ဟုပြောသောအကြောင်းပြချက်မှာ Desktop Environments ဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်လာသည် XFCE, LXQT နှင့် Plasmaပေါင်း Window မန်နေဂျာများ I3WM, IceWM, FluxBox နှင့် OpenBox.
ဒီတစ်ခါတော့ငါရွေးပြီးစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ Matte Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံနည်းကျသောအခြားအပြုသဘောဆောင်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအရာများအကြား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများကယနေ့အလွန်ကောင်းမွန်စွာမှတ်ချက်ပြုထားသော၊
"ဒါဟာပြတင်းပေါက်၏နေရာချထားခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်ကိုထိန်းချုပ်သောပဟေtheိ၏အပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် X ၀ င်းဒိုးအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သော်လည်း Desktop Environment ကိုမလိုအပ်ဘဲလိုအပ်သည်။" Window Managers - GNU / Linux အတွက် Graphical User Interfaces
အောက်ပါ တပ်ဆင်၊ ပြုပြင်၊ အခြားသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အခြားအသုံးပြုသူကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်ဆင်တူသည် DEs နှင့် WMs ငါ့ထံမှ Respin MilagrOS GNU / Linux 2.3 3DE4 (Ultimate)၊ ဒါကကျွန်မရဲ့အသွင်အပြင်ပါပဲ « MX Mate »:
Mate DE အပေါ်ငါ့အမြင်
အခုငါရှိသည် တပ်ဆင်၊ ပြုပြင်၊ ဤသူကားငါ၏ထင်မြင်ချက်များဖြစ်ကြသည် အိမ်ထောင်ဖက် အပေါ် MX Linux:
၎င်းသည်အလွန်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေပြီး startup တွင် RAM သို့မဟုတ် CPU သလောက်မသုံးပါ။
Applications ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မြန်နှုန်းမှာ run ပါ။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ အခြား Desktop Environments နှင့်တတိယပါတီများထံမှဇာတိ application များ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ကိုယ့်ကိုခေါ် linuxero စမ်းသပ်မှုအကြောင်း «MX Mate»ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများပါဝင်သည် Matte Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ငါ့ထုံးစံအတိုင်း Respin အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux အခြေခံ MX Linux; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » MX Mate - Linux စမ်းသပ်မှုနည်းနည်း - MX Linux ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာ
ငါ MATE ကိုလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ အကယ်၍ မှန်ကန်စွာသတိရလျှင်၊ MATE menu အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသေးသည်။ ၎င်းသည် BRISK ဟုခေါ်သည်။ ယခုတွင်ငါသည် KDE NEON ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၎င်းတွင် KDEConnect၊ ငါအများကြီးသုံးသောကိရိယာတစ်ခုရှိပြီး MATE ကိုငါမသုံးတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် MATE သည်အရာခပ်သိမ်းအလုပ်လုပ်သည့်ဂန္ထဝင်အလင်းရောင်စားပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ 🙂
Linus Torvalds သည်စာပို့စာရင်းတွင်ထပ်မံပေါက်ကွဲခဲ့သည်၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အတူဖြစ်သည်